Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 15
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 15
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 15
Chaputa iyi inotaura nezvaJesu seMunhu akauya kuzoponesa vanhu vakazara zvivi.
RUKA 15:1 Zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari; kuzomunzwa.
2 VaFarise navanyori vose vakan’un’una vachiti; Uyu munhu unogamuchira vatadzi achidya navo.
Vakuru vezvitendero vakagumbuka kuti Jesu akagamuchira vatadzi akadya navo.
Saka Jesu akavaudza kuti mufudzi anopedza nguva yake zhinji achitsvaga hwai yakarasika kukunda yaanotarisa hwai iri mudanga (vaJuda vakanaka vanonamata musinagoge).
RUKA 15:3 Zvino wakavaudza mufananidzo uyu achiti;
4 Ndiyaniko kwamuri unamakwai ane zana, kana akarasikirwa nerimwe rawo, ungasasiya makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje akatevera rakarashika kusvikira ariwana?
5 Kana ariwana, unoriisa pamapfudzi ake achifara.
6 Kana asvika kumusha; unokokera shamwari dzake navakavaka naye, akati kwavari; farai neni nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarashika.
7 Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe unotendevuka, kupfuvura pavakarurama vanamakumi mapfumbamwe navapfumbamwe, vasingatsvaki kutendevuka.
Mwari anofadzwa nemutadzi mumwechete anotendeuka, kukunda vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, vasingadi kutendeuka.
Mutadzi mumwe akarasika anoita kuti Mwari ashandise simba zhinji mukuedza kwake kutendeutsa mutadzi iyeye.
Kana mukadzi kakarasikirwa nechinhu chakamukoshera anoita zvose zvaanokwanisa kuti achiwane. Isimba rakadii ringashandiswe pakutsvaga mweya wakarasika nekudzosa mweya iwoyo kuna Mwari?
LUKE 15:8 Ndoupiko mukadzi unamadrakema anegumi, kana akarashikirwa nerimwe ungarege kutungidza mwenje, akatsvaira imba, akatsvakisisa, kusvikira ariwana?
9 Kana ariwana unokokera hama dzake navakavaka naye akati kwavari, farai neni, nokuti ndawana drakema randakanga ndarashikirwa naro.
10 Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uri’po pamberi pavatumwa vaMwari pamusoro pomutadzi mumwe unotendevuka.
Chirevo chakadzama chinoona mukadzi achimiririra kereke.
Kereke yakatanga muTestamente Itsva asi yakabva yarasikirwa nechokwadi chechiporofita chakawanda mukati menguva yeRima. Kubva ipapo nguva yekereke yega yega yakaona kereke ichiedza kutsvaga zvimwe zvidimbu zvedzidziso dzevapostora. Kukunda kwega kungaitwa nekereke kuswedera pedyo neChokwadi chemuBhaibheri.
Chivi zvinoreva kusatenda mune zvakanyorwa muBhaibheri. Kudzoserwa kuitira kuti tiwane chokwadi chekereke yeTestamente Itsva chinhu chatinopemberera zvakanyanya. Zvinoreva kuti Mwari ari kushanda nesu achitiponesa kubva mukusatenda kwedu.
Mwari anoda kunamatwa mumweya nemuzvokwadi.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya,vanomunamata, vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi.
Kutsvaga kwedu, munguva yekupdzisira, ndekwekuti tiwane zaruriro yechokwadi chaMwari chekutanga chatakapiwa muTestamente Itsva.
Zvino ruka akabva ayananisa nemufananidzo unembiri wemwana muparadzi.
Ruka aibata mifananidzo yaitanga ichitaura nezvemunhu.
RUKA 15:11 Zvino wakati; mumwe munhu waiva nevanakomana vaviri:
12 Muduku wavo wakati kuna baba vake; Baba ndipei mugove wenhaka uchazova wangu. Akavagovera fuma yake.
13 Mazuva mashoma akati apfuura, mwanakomana muduku akavunganidza zvose, akaenda kunyika iri kure, akaparadza’ko nhaka yake achifamba nemitovo yakaipa.
Akapererwa nemari nzara ikarova, shamwari dzake dzakamuramba, akapedzisira akugara achidya kudya kwenguruve.
RUKA 15:17 Zvino wakati achifunga, akati: varanda vazhinji sei vababa vangu vanezvokudya zvakawanda, asi ini ndofa pano nenzara!
18 Ndichasimuka ndiende kunababa vangu nditi kwavari: Baba, ndatadzira kudenga, napamberi penyu.
19 Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu; mundiite somumwe wavaranda venyu.
20 Akasimuka akaenda kunababa vake. Wakati achiri kure, baba vake vakamuvona, vakamunzwira tsitsi, vakamhanya, ndokumufungatira nokumusveta.
Baba vake vakamutambira vakamuitira mutambo.
RUKA 15:23 Muvuye nemhuru yakakodzwa, muyibaye tidye, tifare.
24 Nokuti mwanakomana wangu uyu, wakanga afa, wararamazve; wakanga arashika wawanikwa zve. Zvino vakatanga kufara.
Mwanakomana wake mukuru akadzoka asingafari, akati “ndakabatira baba vangu ndakatendeka asi haana mutambo waakandiitira. Asi pakadzoka mutadzi akaipa kumba, mutambo mukuru waitwa”.
RUKA15:31 Ivo vakati kwaari, mwanakomana wangu, iwe uneni nguva dzose, zvose zvangu ndezvako.
32 Kwaifanira kuti tifare, nokufarisisa: nokuti munun’una wako uyu wakanga afa; wakanga arashika akawanika.
Saka Jesu akaedza kutsanangura mufaro unounzwa nemutadzi anenge atendeuka achiuya kuzobatira Mwari.
Iyi yakava kurudziro yakaita kuti kutange nguva yemamishinari.
Kune chikonzero chechipiri kumufananidzo uyu: kereke yemuTestamente itsva ndiwo waive musha wechiKristu. Zvino maKristu akazorasa nzira muNguva yeRima vakawira pasi nerutivi. MuKristu wega wega anofanira kusarudza kuti kudzokera pakutenda kwekutanga kwemuBhaibheri kwakaitwa navapostora ndiyo sarudzo yega inotambirwa naBaba vedu vekumusoro kudenga, sezvo ivo vanhu ivavo ndivo vachazove pachirayiro chemuchato.